ekhaya» Products » Healthcare Equipment » Oximeters Pulse
Iintupha Pulse Oximeter Prince-100B3
Prince-100B Series isebenzisa oled / STN ikhusi, SpO2 kunye nezinga ukubetha zinokufundwa ukusuka engile elikhulu ukuya ku-170 degree, nangaphandle, nesisitheliso bangakwazi rotated kumacala-2 okanye ka-4. Ezongezelelweyo technology Anti-isindululo yenza Prince-100B Series izinzile kwiimeko ezinobunzima ezifana izigulane kufuneka Parkinson.
Iintupha Pulse Oximeter Prince-100B5
Iintupha Pulse Oximeter - Prince-100B
Le ndlela intsha luguqulelo phezulu-ukuya-kumhla Prince-100B series.And ukuba uyavumelana ezininzi bobuncwane ke 100B series. Kodwa
le modeli iyakwazi ukuba amanzi-ubungqina, kokuwa-ubungqina kunye nokothuka-ubungqina. Nokuba uthe umyeke ngengozi, ukuba ayichitheki amanzi kuwo okanye ukuba uhlunguzele umnwe wakho ngoxa kokuba uvavanywe, nangoku enokuqhutywa kakuhle kakhulu.
Ngokuqinisekileyo the best iintupha oximeter kude.
Oximeter lwezilwanyana - Prince-100V
unako kuxhotyiswa boluvo jikelele kuquka ezahlukeneyo
amaqhoshana iziza umlinganiselo ezahlukeneyo, ezifana ngomnwe, umlenze, ngonyawo
Sosana Pulse Oximeter - Prince-100H (Bluet ...
Le Oximeter Iso yenzelwe ukusebenzisa esibhedlele kwezinye,
uluntu zonyango kunye nasemakhaya. Iyafumaneka kwaye
sikuvumela ukuba esweni SpO2 in ixesha elide xa
elele okanye kwezinye umsebenzi ngemihla ngexesha elinye
Le imveliso kusebenza montioring SpO2 kunye PR.
Prince-100D iintupha Oximeter for Children (for ...
Prince-100D & amp; D2 alungiselelwe abantwana kunye umntu ukusetyenziswa zibhityile-umnwe (Finger Φ8-16mm). Obufanayo iteknoloji eyamkelweyo, Prince-100D & amp; D2 ukunika SpO2 & amp; ufundo ukubetha kwentliziyo Inqanaba izinto ezingaphezulu kanye ngokuchaneke Prince-100c Series. Yiyiphi eyona, Prince-100D ihlanganise zitshajwe ezinkozo ibhetri.
Prince-100c iintupha Oximeter (kuba Hongkong kuphela)